लादुक र लामिडाँडामा आपत्कालिन सामान - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
लादुक र लामिडाँडामा आपत्कालिन सामान
दोलखा, २७ मंसिर
दोलखाको विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ लादुक पुग्दा स्थानीय युवा गन्ते तमाङले आफ्नो गाउँका आकस्मिक सामानको बाकस खोले । एउटा ठूलो टिनको बाकस भित्र प्राकृति प्रकोप हुँदा आवश्यक पर्ने सामानहरुले भरिएकोे थियो ।
आफ्नो टोलका लागि आवश्यक सामाग्री त्यही बाकसमा राखिएको उनले बताए । सडकको पहुँच पुगेको र वरिपरीको टोलको बीच पर्ने भएकाले सबैको सल्लाहमा गाउँकै बीचमा ति सामग्री राखिएको उनले बताए । गाउँको बीच पर्ने भएकाले त्यहाँबाट जता प्रकोप हुँदा पनि लैजान सजिलो हुने उनले बताए ।
यस्ता सामग्री राखिएको बाकस लादुकमा मात्र ३ वटा छन् । लादुककै छिमेकी साविकको गाविस लामिडाँडामा पनि यस्ता ३ ठाउँमा बाकसमा आपत्कालिन प्रयोगका सामान छन् । ठूलो बाकस भित्र स्टेचर, हाते माइक, डोरी, साबेल, प्राथमिक उपचारका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु राखिएका छन् । यि सामाग्रीहरु जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी समूहले व्यवस्थापन मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
लादुक साविकको गाविस हो । यहाँ यस्ता आकस्मिक सामग्री राखिएका ३ ठाउँमा राखिएको छ । हालको विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ मा पर्ने लादुक भौगोलिक रुपमा ठूलो क्षेत्र भएकाले यहाँ यस्ता सामाग्री ३ ठाउँमा राखिएको लादुकै लघु तमाङले जानकारी दिइन् ।
२०७२ बैशाख १२ पछिको बैशाख २९ गतेको पराकम्पले देशमै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र लादुककै सिंगटी बजारमा भएको थियो । सिंगटी बजारलाई अहिलेपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा राखे तापनि बसोबास भने रोकिएको छैन ।
सिंगटी खोला र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले पनि त्यत्तिकै वर्षात्मा सताउँदै आएको छ । लादुक र लामिडाँडा चैत बैशाखमा डढेलोको प्रकोप पनि त्यत्तिकै हुन्छ । प्रकोपको कुनै पनि टुङ्गो नहुँने हुँदा पूर्व तयारीको रुपमा आकष्मिक सामग्रीको बन्दोबस्त गरेको विगू गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्टिर खड्काले बताए ।
विगू र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले पनि यस्ता आकष्मिक प्रयोगका सामान व्यवस्थापन गरेका छन् । दुवै गाउँपालिका र जिल्ला प्रकोप उद्धार समितिका लागि १ लाख १० हजार बराबरको उद्धार सामाग्री ह्याण्डिक्याप इन्टरनेशनलको सहयोगमा सञ्चालित प्रयास परियोजनाले सहयोग समेत गरेको छ । परियोजनाले नमूनाको रुपमा मात्र सामाग्री उपलब्ध गराएको सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए ।
प्रयास परियोजना मार्फत सामुदायिक विकास मञ्चले आपत्कालिन अवस्थामा कसरी उद्धार, राहत वितरण, पुर्नस्थापना लगायतका तालिम र नमूना प्रर्दशनी समेत गराएको छ । नमूना प्रदर्शनीपछि उनीहरुका लागि नमूनाका रुपमा आपत्कालिन प्रयोगका सामग्री समेत समुदायलाई वितरण गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए । विगू गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष बुक्ताम तमाङले सबैकाे पायक पनेर् गरी राखिएकाे बताए ।
प्रयास कार्यक्रमको प्रभावकारीताको बारेमा सञ्चारकर्मी र जिल्लास्तरबाट समेत स्थलगत अनुगमण भएको छ । गाउँ टोलटोलमा प्रकोप व्यवस्थापन र आकस्मिक प्रयोगका सामाग्री राख्नु प्रकोपप्रति स्थानीयहरुको चेतनास्तर बढेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका सदस्य मुरारीराज शिवाकोटीले बताए । दोलखामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रकोप व्यवस्थापनका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।